False Pregnancy - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” စိတျကူးထဲက ကိုယျဝနျဆောငျ “
ကိုယျဝနျဆောငျတဈယောကျ….၉လလှယျပွီး ၁၀လပွညျ့လို့ မီးဖှားမညျဆိုကာမှ…ဗိုကျထဲမှာ သန်ဓသေားမရှိခဲ့လြှငျ???
ကလေးအရမျးလိုခငျြနတေဲ့ အမြိုးသမီးတဈဦးမှာ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးနဲ့ ကွုံတှလေ့ာရမညျဆိုပါက ဒါသညျ အလှနျတုနျလှုပျဖှယျရာ လကျမခံနိုငျစရာကိစ်စတဈခု ဖွဈလာနိုငျပွီး…..အခြို့ဆို စိတျဓာတျအကလြှနျပွီး မိမိကိုယျကို သတျသသေညျ့ဖွဈရပျမြားပငျ ရှိဖူးကွောငျးတှရေ့သညျ။
ဆေးပညာအချေါအဝျေါအရ ကိုယျဝနျတု (သို့)စိတျကူးယဉျကိုယျဝနျဟု ချေါဝျေါကွသညျ။အပျေါမှာပွောခဲ့သလိုမြိုး ကလေးအရမျးလိုခငျြနတေဲ့ အမြိုးသမီးတှမှောတှရေ့တတျသလို၊ လကျမထပျခငျအတူနကွေပွီး ကိုယျဝနျရသှားမှာ အရမျးကွောကျနတေဲ့ မိနျးကလေးတှမှောလညျး တှရေ့နိုငျတယျ။ကိုယျဝနျခဏခဏပကျြကဖြူးသူ၊ကလေးဆုံးရှုံးဖူးသူ၊ကလေးမရနိုငျသူမြားမှာလညျး တှရေ့သညျ။
ဖွဈရတဲ့အကွောငျးရငျးကိုတော့ တိတိကကြမြပွောနိုငျသေးသျောငွား မိမိကိုယျတိုငျရဲ့စိတျအခွအေနကွေောငျ့ ဖွဈရကွောငျး လလေ့ာတှရှေိ့ရတယျ။စိတျကူးယဉျကိုယျဝနျနဲ့ တကယျ့ကိုယျဝနျရဲ့ လက်ခဏာတှကေ လုံးလုံးလြားလြားနီးပါး ထပျတူကတြတျတယျ။ကိုယျဝနျရှိခြိနျမှာဖွဈသလိုမြိုးပဲ ရာသီသှေးမပျေါ၊ပါးစပျပကျြ၊အစားမစားခငျြ၊မူးဝေ၊ပြို့အနျ၊ရငျသားတှနော၊နုံး…. စတာတှဖွေဈမယျ။ကိုယျအလေးခြိနျတကျမယျ။လရငျ့လာတာနဲ့အမြှဗိုကျထှကျလာမယျ။ကလေးလှုပျတာမြိးု ခံစားရမယျ။ခါးနာမယျ။ဆီးခဏခဏသှားမယျ။တကယျ့ကို လက်ခဏာအားလုံး ခြှတျစှပျနီးပါးတူပွီး….မတူတာဆိုလို့ ဆီးစဈတဲ့အခါ တဈကွောငျးပဲပျေါ (ကိုယျဝနျမရှိ)ပွီး၊ အာထရာဆောငျးရိုကျရငျလညျး သားအိမျထဲသန်ဓသေားမတှရေ့….သညျစဈဆေးမှုနှဈခုလုံးဖွငျ့သာ ကိုယျဝနျအတုအစဈ ခှဲခွားသညျ။
ကလေးလိုခငျြနသေူမြားအတှကျ အလှနျအမငျး စိတျထိခိုကျဖှယျအခွအေနဖွေဈတာကွောငျ့ အိမျထောကျဖကျနှငျ့ မိသားစုဝငျမြား၏ အားပေးနှဈသိမျ့မှု အထူးလိုအပျပွီး ၊ စိတျရောဂါအထူးကုဆရာဝနျရဲ့ အကူအညီလညျး လိုအပျနိုငျပါသညျ။
” စိတ်ကူးထဲက ကိုယ်ဝန်ဆောင် “
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်….၉လလွယ်ပြီး ၁၀လပြည့်လို့ မီးဖွားမည်ဆိုကာမှ…ဗိုက်ထဲမှာ သန္ဓေသားမရှိခဲ့လျှင်???
ကလေးအရမ်းလိုချင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့လာရမည်ဆိုပါက ဒါသည် အလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ လက်မခံနိုင်စရာကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပြီး…..အချို့ဆို စိတ်ဓာတ်အကျလွန်ပြီး မိမိကိုယ်ကို သတ်သေသည့်ဖြစ်ရပ်များပင် ရှိဖူးကြောင်းတွေ့ရသည်။
ဆေးပညာအခေါ်အဝေါ်အရ ကိုယ်ဝန်တု (သို့)စိတ်ကူးယဉ်ကိုယ်ဝန်ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုမျိုး ကလေးအရမ်းလိုချင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာတွေ့ရတတ်သလို၊ လက်မထပ်ခင်အတူနေကြပြီး ကိုယ်ဝန်ရသွားမှာ အရမ်းကြောက်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာလည်း တွေ့ရနိုင်တယ်။ကိုယ်ဝန်ခဏခဏပျက်ကျဖူးသူ၊ကလေးဆုံးရှုံးဖူးသူ၊ကလေးမရနိုင်သူများမှာလည်း တွေ့ရသည်။
ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးသော်ငြား မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကြောင့် ဖြစ်ရကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်။စိတ်ကူးယဉ်ကိုယ်ဝန်နဲ့ တကယ့်ကိုယ်ဝန်ရဲ့ လက္ခဏာတွေက လုံးလုံးလျားလျားနီးပါး ထပ်တူကျတတ်တယ်။ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မှာဖြစ်သလိုမျိုးပဲ ရာသီသွေးမပေါ်၊ပါးစပ်ပျက်၊အစားမစားချင်၊မူးဝေ၊ပျို့အန်၊ရင်သားတွေနာ၊နုံး…. စတာတွေဖြစ်မယ်။ကိုယ်အလေးချိန်တက်မယ်။လရင့်လာတာနဲ့အမျှဗိုက်ထွက်လာမယ်။ကလေးလှုပ်တာမျိးု ခံစားရမယ်။ခါးနာမယ်။ဆီးခဏခဏသွားမယ်။တကယ့်ကို လက္ခဏာအားလုံး ချွတ်စွပ်နီးပါးတူပြီး….မတူတာဆိုလို့ ဆီးစစ်တဲ့အခါ တစ်ကြောင်းပဲပေါ် (ကိုယ်ဝန်မရှိ)ပြီး၊ အာထရာဆောင်းရိုက်ရင်လည်း သားအိမ်ထဲသန္ဓေသားမတွေ့ရ….သည်စစ်ဆေးမှုနှစ်ခုလုံးဖြင့်သာ ကိုယ်ဝန်အတုအစစ် ခွဲခြားသည်။
ကလေးလိုချင်နေသူများအတွက် အလွန်အမင်း စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့် အိမ်ထောက်ဖက်နှင့် မိသားစုဝင်များ၏ အားပေးနှစ်သိမ့်မှု အထူးလိုအပ်ပြီး ၊ စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ရဲ့ အကူအညီလည်း လိုအပ်နိုင်ပါသည်။